Somali daily News – Habeenka Aqalgalka & bekra jibinta Home
Habeenka Aqalgalka & bekra jibinta
shinganinews September 17, 2012
Habeenka Aqal galka oo ah habeen aad u xiiso badan lamaanaha oona ugu magac darnay kala guurka nolosha inagoo kala jeedna habeenka gabadha ugu Dareenka badan sababtoo ah malintas waxaa ay la kulmidontaa nin ay kala ahaayeen ajnabi oo habeen kaasna noqondoonaan mid iida xalal iyo farxad u ah guri cidna lajoogin isuguna soo haraayaan .
Gabdhaha qaar aad iyo aad ayay u qarqaraan iyadoo anan wax ba ka ogeyn fikradna ka haynin sida ayla kulmi doonaan habeenka Aqalgalka . sababtoo ah wax fikir ka ma hayso waxaan idin leeynahay. Habeen kaan waa habeen ka dunida ugu macaan badan hablahana oo dhana way maridoonaan habeenkaan oo Bekra-jebinta ah qofwaliba oo dumar ah iyadoo la socda xanuun yar oon micne lahayn, watana macaan illowsiisa cabsida oo dhan.
Qaar ka mid ah Raga soomaliyeed ayaa waxa ku soo gudboonadaa qaabka xaasaskooda u bikra-jibin lahaayeen iyadoo lakumaayaan dhibaato faraha badan
Waxaa u haboon ninka in uusan ka nixin isla markaana u muujiyo dareen jaceyl xiliga sariirta
Naakagaha la guursadayna waxaa waajib ku ah in ay is ku diyaariso ninkeeda habeenkaas iyadoo farxat u muujineesa maxaa yeelay habeenka aqal galku waa habeen ka ugu horeya ay la kulmilaheyd ninkeeda xalaasha ah waxaana ku xeran nolasheeda iyo mustaqbalkeeda waana hadafkeeda koowaad Gabadha iida xulatay lamaanaheeda ma ahan in ay cabsato wa in aad u diyaar garowdaa waa in a u dhawaataa una dadajisaa maxaa yeelay waa ninki ay la noolaan laheed Uuna ka bilaabo salaaxid raaxo leh iyo istiimis lagana rabo si said u kiciyo dareenkeeda si aan caadi aheeyn waa in si hoose u dagaan dago malabyarooga Gabadhu una isticmaalo fisaliin ama wixii lamid ah oo jilacsan adigoo si tartiib ah u gilineyso faruuraha hore wallow laga lagaa rabo in xuubka kore inta badan ku cel celsho hore u gelin.
Waa in Gabadha labada Lugood laabto si Ninkeyda ugu sahlo in si fudud ugeliyo malabyarooga ugaaro waxaa ninka laga donayan in si aad ugu riixin geydkiisa. Looma Baahna in Awood loo isticmaalo meesha si xun loo tol tolay waxaa ka imaan kara dhaawac daran oo naagta gaarsiin kara heer ey Nacdo Galmada hadiiba dhowr habeen sidaa yeelo dhib ayaa oga imaan kara mustaqbalka
Markasta ay qayliso waxaa la rabaa inuu joojiyo riixidda, faasaliinta ayaa ugu roon wax meesha la mariyo marka la rabo in gabadha la bekro jabiyo, gabdhaha aan la gudin aad bay u fududyihiin. Hadii Gabadhaas ku jiifto sariir nuucee rabto ha noqotay hoosta ka soo geli barkin ku qaas ah oo adag hana isticmaalin nuuca kujiifaneysid waxa laga yabaa in kasoo dareero dhacaan ame Dhiig .
Dumarka qaarkood ayaa si weyn u xanuunsada habeenka bigka jabinta ayadoo si weyn losoo tol tolay inkastoo sanadihi ugu danbeesay aan jirin gabar la isdhihi karo bigro sida shegeen raga qaarkood marka guursadeen wallow qaarkood la kulmeen dhacdooyin aan ka fileen gabadhaha lagana yaabo in sababto in oo Furo
POSTED IN » Maqaalo